Архивы Rumaynta - Naadiga Muslimka
HSBC ma leedahay bangi Islaami ah?
Category: CAQIIDADA 0
Marka laga reebo hawlaha bangiyada jumlada ah, HSBC kuma bixin doonto wax soo saarka Islaamka gudaha Britain, Imaaraadka Carabta, Bahrain, Bangladesh, Singapore iyo Mauritius, ayay tidhi. Bankiga ayaa sheegay...
Maxaa ku dhiiri galinaya Islaamka?
Maxaa ku dhiiri galiyay Islaamka? Ducada iyo u dhawaanshaha Alle waqti wacyi galin degdeg ah ayaa ah ilaha waxyiga. ... Alle waa kan waxyiga, ducada waa...
Su'aal: Runtii Zara ma ku dhimatay Ishq Subxaanallah?
MUMBAI: Zee TV's Ishq Subxaan Allaah wuxuu ku wajahan yahay heerkiisa ugu sarreeya, sidaas darteed riwaayadaha iyo qallooca ayaa aad u kordhay. Wuxuu daaha ka qaadi doonaa in Zara aysan dhiman….
Cidiyaha ma jari kartaa Ramadaanka?
Miyaan cidiyaheenna iska jari karin innagoo sooman Ramadaan, mise waa khuraafaad? – Quora. Soonku xidhiidh kuma lahan jarista cidiyaha. Soonka kaliya ayaa ka aamusa…
Waqooyiga Suudaan ma waddan Muslim ah?
Diinta rasmiga ah ee Suudaan waa Islaamka. Runtii, inta badan dadka Suudaan waxay u aqoonsan yihiin inay yihiin Muslim, guud ahaan waxay ka tirsan yihiin laanta Islaamka ee Sunniga. Diinta...
Jawaab degdeg ah: Sidee ayuu soonku u saameeyaa Ramadaanka?
Saamaynta si wanaagsan loo diiwaangeliyey ee Soonka Ramadaanka waxa ka mid ah isbeddellada laxanka wareegga [3,4], physiological, metabolic and endocrine function [6-8], iyo sidoo kale dhimista fuuq-celinta maalintii, gulukooska dhiigga iyo jidhka.
Dadka xijaaban ma xiran karaan surwaal?
Jilbaab looma baahna. Surwaal ballaadhan iyo shaadh gacmo-dheer waa inay ahaadaan kuwo fiican, waase haddii shaadhka uu sidoo kale dabacsan yahay oo aanu muuqaal ahaan kor u qaadin baska….
Maxaa loo arkaa maandooriyaha diinta Islaamka?
Khamr ( Af-Carabi : خمر ) waa kelmad Carabi ah oo lagu sakhraamo; (qaab jamac ah, Khumūr (Carabi: خمور), waxaa lagu qeexaa sida khamriga, khamriga). Wadamada Islaamka waxay leeyihiin heerar hoose oo…
Su'aashaada: Koriinka timuhu ma yihiin kuwo ka hooseeya Xaram?
Wejiga beddelaadda subliminals ma Xaaraan? Haa Subliminals-ka jirka ee aadka u baddalaya sida midabka indhaha oo is beddela iwm lama ogola sababtoo ah waxay la macno tahay inaadan faraxsanayn ama…
Waxaad waydiisay: USDA ma xalaal baa?
Dawladda Maraykanku kuma lug laha arrimaha diinta, waana sababta ay hay'adaha USDA ka mid tahay aanay caddaynin cuntooyin xalaal ah ama kosher ah. Taasi waa inay…
1 2 ... 256 Next
Goorma ayay bilaabatay Ciidul Fitriga?
Xariir la isku daray ma Xaaraam baa?
Ma samayn kartaa nikah Ramadaanka?
Waxaad waydiisay: Maxay ka dhigan tahay inaad soo gasho diinta Islaamka?
Soonka Ramadaan ma kuu fiican yahay?
Su'aashaada: xidhashada anqawga dembi ma ka tahay Islaamka?
Miyaan farmaajo xalaal noqon karin?